Taratasy fanokafana avy any Digia mankany amin'ny The Community KDE | Avy amin'ny Linux
Araka ny ho fantatry ny maro, Digia dia nividy tamin'ny Nokia izay rehetra mifandray Qt, Ka ity orinasa ity dia ho lasa ilay manapa-kevitra hoe hanao ahoana ny hoavin'ity Framework multiplatform ity, zavatra iray izay mety hahaliana mihoatra ny iray.
Anisan'ireo tsy milamina indrindra, mazava ho azy, ny mpampiasa ny KDE, tontolon'ny Desktop iray novolavolaina tamin'ny tranomboky Qt, so Digia namoaka a Taratasy misokatra ho an'ny fiarahamonin'izy ireo, izay nadikany Tena Linux ary mahazo alalana aminao no itondrako azy eto:
Ry vondrom-piarahamonina KDE,
Araka ny efa henonao dia nanambara i Digia fa mikasa ny hahazo ny teknolojia Qt an'i Nokia izy. Ity hetsika ity dia miantoka ny ho avin'ny Qt ho toy ny rafitra fampandrosoana farany tsara indrindra. Izy io koa dia mitondra ampahany amin'ny ekipan'ny Qt an'i Nokia, izay miaraka amin'ny ekipan'ny Qt R&D an'i Digia, dia afaka handray ny fampandrosoana Qt lavitra kokoa.
Amin'ity fahazoana ity Digia no ho orinasa lehibe tompon'andraikitra amin'ny Qt, tsy ho an'ny asa fahazoan-dàlana ara-barotra ihany. Mino ny herin'ny fahazoan-dàlana Qt roa izahay. Sarobidy lehibe ho an'ny Qt izy io izay azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana amina loharanom-bola sy open source. Tianay ny manohy ny simbiose miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina KDE sy ny KDE Free Qt Foundation.
Digia dia hanatanteraka ny fiasan'ny Tetikasa Qt, ao anatin'izany ny fandaminana ireo rafitra manan-danja amin'ny alàlan'ny Qt Project Foundation. Tena zava-dehibe ho antsika ny fananana fandraisana anjara marobe avy amin'ny mpikambana samihafa ao amin'ny fiaraha-monina Qt. Tianay ny hiara-hiasa amin'ny tontolo iainana Qt manontolo amin'ny alàlan'ny Tetikasa Qt hahazoana antoka fa hikolokoloana ny Qt amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana malalaka sy ara-barotra.
Ny fitohizan'ny fampandrosoana Qt dia sady fanamby no fanararaotra. Eo am-pelatanan'ny vondrom-piarahamonina sy i Digia ny hiantoka ny ho avin'ny Qt ho toy ny rafitry ny fampandrosoana multiplatform tsara indrindra, fanamby iray horaisinay. Ny vondrom-piarahamonina KDE dia singa iray lehibe sy mpandray anjara amin'ny Qt ary noho izany dia tianay ny hampivelatra bebe kokoa ny fifandraisantsika aminy, amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra matanjaka kokoa sy ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy.
Hanohy ny asa napetrak'i Trolltech tany am-boalohany nandritra ny 15 taona mahery izahay mba hamolavola rafitra ahafahanao manoratra ny kaody indray mandeha ary mampivelatra azy na aiza na aiza. Hanao ny fanatsarana ny Qt izahay, mba hahafahan'ny mpanjifanay sy ny mpampiasa loharano misokatra miankina amin'ny famatsiam-bola mitohy Digia mba hanomezana rafitra izay hahomby amin'ny tetikasan'izy ireo. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny KDE izahay hanamafisana sy hanitarana ny fahatongavan'i Qt manerantany.
Afaka iray volana eo ho eo dia ho vita ny ara-dalàna amin'ny fahazoana azy. Alohan'izany dia te-handamina zavatra miaraka aminao izahay (ny vondrom-piarahamonina KDE) ary amin'ireo mpilalao manan-danja hafa ao amin'ny fiarahamonina Qt. Tianay ny mifanakalo hevitra sy miombon-kevitra amin'ny ho avin'ny Qt, hahafahanay rehetra miasa miaraka am-pahombiazana rehefa vita ny fifanakalozana.
Manantena aho fa hitovy daholo ny zava-drehetra Tuukka turunen milaza, satria raha tsy izany, ny hoavin'ny KDE mety ho tandindomin-doza ianao raha tonga ny fotoana, tsy afaka mifamadika fivarotam-boky izy ireo. Ary koa, saika loza raha tsy maintsy manomboka ny zava-drehetra manomboka amin'ny rangotra from
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Taratasy fanokafana avy any Digia mankany amin'ny The Community KDE
raha mbola manatsara ny KDE ny zava-drehetra dia tongasoa i Digia
Manantena aho fa tsy ho tahaka an'i Oracle.
Aza mampidi-doza, amin'izay no manomboka miely ny tsaho, ary rahampitso dia hisy ny filazan'ny Internet hoe "maty Qt !!!" na zavatra mitovy amin'izany. Ary tsy mahafinaritra izany.
Voalohany, tsy misy antony hitarihan'i Digia ny Qt noho ny Nokia. Ho tombontsoanao manokana izany.
Faharoa, raha manapa-kevitra ny hanao «fomba oracle» ianao, dia natao ho an'ny zavatra iray ny Governemanta Misokatra, ary avy eo ny Tetikasa Qt. Ary ho an'ny zavatra Qt MAIMAIMPOANA.
Toa mahatalanjona ahy ny niafaran'ilay lahatsoratra tamin'ny "Ankoatr'izay, ho saika loza raha tsy maintsy manomboka ny zava-drehetra hatrany am-boalohany." Hatrany am-piandohana? Toa tsy dia hainao loatra ny fiasan'ny rindrambaiko maimaimpoana. Libreoffice, iza ??
Rehefa miakatra amin'ny Qt izy ireo, dia sahirana be amin'ireo mpampiasa KDE sy devs maro ...
Gtk dia tsy voatazon'ny fiarahamonina? raha misy zavatra mitranga amin'ny qt tsy afaka manao toy izany koa?
Tsia. Mieritreritra aho fa tsy voatazon'ny Vondron'olona ny Gtk.
mmmm fantatro fa ny mpanoratra dia ireo fanoloran-tena ireo http://git.gnome.org/browse/gtk+/log/ Anisan'ny vondrom-piarahamonina izy ireo ka eny ny valiny, ary raha ny fanontaniana faharoa, dia manamafy ihany koa ny valiny. Miara-miaina miaraka amin'ny rindranasa GTK + i KDE, mila manadio kely fotsiny ny mpitantana ny varavarankely plasma izy ireo, mampifanaraka azy, na dia maharitra fotoana fohy araka izay tratra aza izany. Raha tokony ho any amin'ny GTK + izany dia handeha any amin'ny EFL ihany koa, maro ny widgets no ampiasaina toy ny amin'ny plasma na hampiasa mpitantana varavarankely izy ireo ary hanoratra indray ny takelaka ao amin'ny GTK +, raha fintinina, misy safidy maro ka ao amin'ireo fanontanianao roa dia eny: D.
Misy fidirana ao amin'ny tranokala KDE SC izay niresahan'izy ireo momba ny fivoaran'ny Qt manomboka izao sy ny fifandraisan'ny KDE SC amin'i Digia sy ny tontolo iainana Qt.
Tsy fantatro izay toa anao, fa ny KDE SC 4.9 dia mpirotsaka hofidiana ho an'ny birao tsara indrindra ho an'ny GNU / Linux - miaraka amin'i Xfce amin'ny faha-2. toerana.
Mbola miandry aho hoe ho aiza no alehan'izy ireo amin'ilay tetikasa Kanelina, izay mampanantena be nefa tsy namoaka famoahana vaovao efa ela.
Tsy nanandrana aho KDE 4.9, saingy lazain'izy ireo fa be ny vaovao ao .. Ny zavatra ratsy dia amin'izao fotoana izao, misalasala be aho fa hiditra io Fitsapana i Debian.
Debian mampiasa KDE dia tokony handinika ny famindrana mankany Kubuntu (Netrunner, Linux Mint) na, amin'ny purely, aptosid na Siduction fotsiny.
Inona no antony? 😕
Fanazavana iray, elav: raha sendra olana lehibe dia ratsy be ho an'ny KDE izany noho ny fahaverezan'ny mpamorona Qt, saingy tsy tokony hanomboka amin'ny voalohany isika. Trolltech dia efa niandraikitra ny fiantohana izany olana izany rehefa nividy azy i Nokia, nanome fahazoan-dàlana ny Qt ho GPL 3. Raha ny tranga ratsy indrindra dia hamerina ny fivoaran'ny Qt ny vondrom-piarahamonina avy amin'ny kinova farany navoaka, izay efa Qt 5.
Saingy tsy hitako izay. Ny KDE sy Qt dia niara-niasa akaiky nandritra ny taona maro, ary inona ny sehatry ny fampandrosoana tsara kokoa ho hitan'i Qt noho ny vondrom-piarahamonina KDE (toa mitovy hevitra ihany ny Digia amin'izao fotoana izao).
Tena marina ny anao. Hadinoko ny olan'ny fahazoan-dàlana .. Misaotra MetalByte.
Amin'ny maha mpampiasa ahy KDE, ny zavatra nambaran'ny DIGIA tamin'ny vondrom-piarahamonina KDE dia nanome fiadan-tsaina be ho ahy ^ __ ^
Ny fahazoan-dàlana GPL dia sangan'asa, mifono vy tsara, tsy mila atahorana ireo mpampiasa QT.
Famaritana tsara inona, "sangan'asa, mifono vy tsara."
"LPG dia sangan'asa, voadio tsara" fehezan-teny tena tsara.
[Howto] Miteraha fonosana sy derivatives lozisialy Arch Linux